China 2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsiketsika loha hazavana sehatra hazavana matihanina fanamboarana sy orinasa | Mihoatra
2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsiketsika loha hazavana sehatra hazavana matihanina
2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsiketsika loha hazavana sehatra hazavana matihanina, dia karazana stroboar vaovao novolavolainay. Amin'ny tsena ankehitriny, ny ankamaroan'ny jiro strobo mahery vaika dia hazavana static, isika no orinasa voalohany any Sina nanao ny jiro vokarin'ny hazavana avo lenta amin'ny endrika jiro loha mihetsika. Tombontsoa avy amin'ny traikefa fampiroboroboana ny jiro mandritra ny 10 taona mahery, azontsika atao ny mamolavola azy io ho rafitra mangatsiatsiaka tsara hahatratrarana famirapiratanana avo lenta nefa kely habe. famokarana faobe alohan'ny anombohana azy amin'ny tsena.
Led mitambatra ampahany roa, afovoany dia 96 faritany 10W fotsy Led, lafiny roa total 768 faritana 0,5W RGB 3in1 Led. Middle fotsy tarihina faritra mizara ho fizarana 4. Ny faritra mitarika miloko RGB dia mizara ho fizarana 12, fanaraha-maso miaraka amin'ny protokol DMX512, RDM.
Famirapiratan-kery sy haingam-pandeha avo lenta, fanjavozavo feno ny optique optika, karazana effet Marco 56 karazana. Akanjo mitazona haingana 1-25 Hz / S.
2021 vokatra vaovao 2000W Led strobo mihetsiketsika loha
jiro sehatra matihanina
Jiro 2021 vaovao tonga izy io, tsy miankina amin'ny jiro mihoatra ny jiro. Talohan'ny R&D ity famirapiratan'ny lohany ity dia nitondra loha, 3 taona lasa izay dia efa namolavola sy namokatra jiro strobo ivelany izahay ary nahazo varotra sy hevitra tsara avy amin'ny tsena.
Ity lohahevitra vaovao ity dia mitarika loha, fa tsy mamaha ny olan'ny jiro ihany fa tsy ampy ny famirapiratana, na koa ny loko tsy ampy manankarena, fa koa mamaha ny olana izay tsy afaka mametraka lalana samihafa amin'ny hazavana stereo static eny an-tsehatra.
Ity strobo ity dia manazava ny rafitry ny lokony ampiarahan'ny RGB 3in1 Led + White Led mahery vaika.
White Led natambatra tamin'ny 96 * 10W LED, 4 ny fizarana vokany.
RGB 3in1 Led natambatra tamin'ny 768 * 0.5W nateraka, vokany 12.
Ny lapoaly sy ny fitongilany dia nampiasa motera dingana 3 ary manome toerana haingana, malefaka ary mazava tsara, ary fandidiana mangina. Fanaparitahana hafanana avo lenta sy famirapiratana avo ary fahaizan'ny strobozy matanjaka ihany koa.
Loharano nateraka 768 * 0.5w RGB 3-in1 LED, 96 * 10w fotsy no mitarika (6500K) fanendasana 540 °, fahamendrehana 2.11 ° / dingana, fahamendrehana amin'ny famolavolana tsara: 0,008 °;
Sudin'ny zana-kazo 130 ° Tiit 270 °, fahamendrehana 0.86 ° / dingana, fahamendrehana amin'ny famolavolana tsara: 0,0034 °;
Fanjifana herinaratra 1200W Mampiasa rafitra famerenana kaody matevina
Fomba fanaraha-maso DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / RDM miseho Fampisehoana loko TFT mahatratra 1,8 mirefy 180 ° azo ovaina
Mode DMX 15/10/25/29 CH Data ao amin'ny foibe / Out Sockets XLR 3-pin & 5-pin
fanalefahana sehatra feno optika, fahamendrehana haavo 65536; Naoty fiarovana IP20
Akanjo mitazona haingana 1 ~ 25Hz; famaritana
Ny hazavana fotsy dia mizara ho faritra 4 hifehezana, ary ny loko dia mizara ho faritra 12 hifehezana; lafiny 376 × 490 × 388mm; NW: 17 kilao
Preset 56 karazana effets makro vokariny Fonosana mahazatra: baoritra; tranga sidina raha azo atao
Famantarana ny mari-pana momba ny maripana, fanitsiana manan-tsaina ny loharano maivana Fanamarinana
Maody fiara tsy tapaka ankehitriny ； Mametaka farango napetraka CE, ROHS
F:Mba miangavy re manoro hevitra raha manana fankatoavana CE ny vokatrao na mikasa ny hahazo fankatoavana tsy ho ela ianao?
RE: Ny vokatra rehetra dia voamarina amin'ny CE & RoHS, manana ny tatitra EMC & LVD
F: Afaka mahazo santionany maimaimpoana ve aho?
Re: Misaotra tamin'ny fikasana hanandrana sy hijery ireo jironay, nankasitraka be dia be izahay, raha ny santionany maimaimpoana dia tsy azo omena ho sandany ambony, misaotra ny fahazoanao. saingy azo antoka fa hiezaka mafy aho hanome anao ny vidiny tsara amin'ny filaminana ofisialy araka ny habetsanao.
F: Inona’ny MOQ anao momba ireo vokatra ireo?
Re: sombin-javatra 1, satria takatsika fa mety te hanandrana santionany aloha ny mpanjifa indraindray.
F: Ahoana ny antoka?
RE: Warranty 2 taona. Mandritra ny fiantohana raha toa ka misy olana ny jiro dia hizaha anao izahay ary hamafana ireo olana dia handefa maimaimpoana hisolo ireo faritra, raha lany ny antoka, hanome torolàlana ara-teknika izahay ary handefa ireo kojakoja fiantsenana izay miandraikitra izany.
F: Rehefa mametraka kaomandy aho, afaka mahazo kojakoja fanampiny ao amin'ny FOC?
Re: 1% ny kojakoja malalaka azo omena raha amina filaharam-be, vola kely tsy omentsika ny kojakoja malalaka.
Teo aloha: 25x40W Magic Panel Matrix zoom head dia manana jiro tarehy sy stotelo indroa
Manaraka: IP65 4x200w avo lenta avo 800w COB Led jiro jiro